Inketho entsha ye-Hi-Fi kunye nesizukulwana sesithathu se-AirPods, kungekudala kakhulu ngokweendlebe | Ndisuka mac
Amarhe ayahamba. Abo bathi iApple iza kuyazisa kungekudala Inguqulelo yesithathu yee-AirPods. Ezo smart, ii-headphone ezingenazingcingo ezihlaziye intengiso. Okwangoku akukho mntu uhla ngesitrato ngemodeli ye-Apple okanye efanayo. Amarhe ayanda kwaye athi sikufutshane ekumiselweni kwale nguqulo yesithathu kodwa kukwongezwa ukusebenza okutsha: Inketho entsha ye-Hi-Fi.
Kudala sive okwethutyana ukuba isizukulwana sesithathu see-Airpods sikufuphi kakhulu ukuba saziswe. Kuyinyani ukuba bebeqikelelwa ngenyanga kaMatshi nakwimeko yeApple ngo-Epreli. Akukho kwanto. Okwangoku siqhubeka nesizukulwane sesibini sehedsphone yentsusa kunye nePro kunye noMax. Kodwa amahemuhemu ayaqina, Oko kuthetha ukuba sinokubona kungekudala esi sizukulwana sesithathu ukuba, njengoko ubona kumfanekiso okweli nqaku, ujongeka kakhulu njengePro.
Ngokutsho kwesibini se iingxelo ezahlukeneyo, I-Apple ayisebenzi kuphela kwisizukulwana sesithathu see-AirPods, kodwa ikwonyusa okuhle kwi umgangatho weaudiyo yeApple Music, kanjalo. U-Apple kufanele ukuba atyhile ii-AirPods ezintsha kunye nenqanaba elitsha le-Hi-Fi ye-Apple Music "kwiiveki ezimbalwa ezizayo." Oku kunokuqinisekiswa yikhowudi efunyenwe ngaphakathi kwe-beta ye-iOS 14.6 ebonisa inqanaba elitsha le-Apple Music.
I-Apple inokukwazi ukulinda kude kube INkomfa yabaPhuhlisi beHlabathi liphela, izakubanjwa kwasekuqaleni kuJuni. Ngokwesiqhelo ngumnyhadala wesoftware-enzima, kodwa iApple ibhengeze izixhobo zekhompyutha ngaphambili. Mhlawumbi mhlawumbi kulapho sibona ii-headphone ezintsha. Nangona ungazisungula nanini na xa ufuna kwaye ukhatshwa kukupapashwa kweendaba. Emva kwayo yonke loo nto, olu hlaziyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Inketho entsha ye-Hi-Fi kunye ne-XNUMXth Gen AirPods ezizayo kungekudala ngokweRumor